Prof Dufle oo sheegay in markii dalka uu bur-buray daladaha waxbarashada ay qaateen kaalin muhiim ah – Kalfadhi
Guddoomiyaha Guddiga arrimaha bulshada ee Aqalka Sare Prof Cismaan Maxamuud Dufle, ayaa sheegay in daladaha waxbarashada dalka ka jiray, markii bur-burka uu ka dhacay dalka, in ay kaalin muhiim ah ka qaateen dhinaca waxbarashada Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale sheegay, haddii aysan ahaan laheyn dalaha, in aysan dhici laheyn in maanta laga hadlo tayenta waxbarashada Jaamacaha ku yaalla dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddiga arrimaha bulshada ee Aqalka Sare Prof Cismaan Maxamuud Dufle, ayaa hadalkaasi ka sheegay kulan maanta ka dhacay Muqdishu oo lagu shaacinayay Guddigan Qaran ee Taclinta Sare ee KMG ah oo ay magacowday Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa uu ammaanay tirada Jaamacaha dalka, kuwaas oo soo saara arday badan sanad kasta balse waxaa uu carabka ku dhuftay in ay jirto dayo la’aan.
Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka Waxbarashada, Cabdiraxmaan Maxamuud Cadulle jaabiri wasiiru Dowlaha wasaaraddaasi Xildhibaan Cali Cismaan (Cali Jowhar) guddoomiyaha Guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka iyo Prof Cismaan Maxamuud Dufle guddoomiyaha Guddiga arrimaha bulshada ee Aqalka Sare ayaa si wada jir ah u sheegay in ay tahay talaabo dhanka horumarka ah loo qaaday tayaynta Taclinta sare ee dalka.
Prof Cismaan Maxamuud Dufle, ayaa waxaa uu ahaa mid kamid ah maclimiintii Jaamacada Qaranka sanadihii sideedamaadkii, isagoona sidoo kale hadda ah mid kamid ah maclimiinta Jaamacaha dalka.
Xildhibaan Odowaa oo maanta tagaya magaalada Dhuusamareeb